होसियार ! ओमिक्रोनबाट निको भइसकेपछि पनि छालामा देखिन्छन् यी ४ खतरनाक लक्षण, तुरुन्तै उपचार गर्नुहोस् – List Khabar
Home / समाचार / होसियार ! ओमिक्रोनबाट निको भइसकेपछि पनि छालामा देखिन्छन् यी ४ खतरनाक लक्षण, तुरुन्तै उपचार गर्नुहोस्
admin February 14, 2022 समाचार Leaveacomment 42 Views
कोभिड–१९ श्वासप्रश्वास प्रणालीको सङ्क्रमण हो तर यसले मानव शरीरमा आ’क्र’मण गरेपछि धेरै जटिलताहरू जन्माउँछ र शरीरबाट बाहिर निस्केपछि पनि यसले केही निशान छोड्छ, जुन महिनौंसम्म शरीरमा रहिरहन्छ। कोरोना भाइरसको यो सुपर स्प्रेडर भेरियन्ट ओमिक्रोनले छिटो सर्ने मात्र होइन शरीरमा धेरै किसिमले क्षति पुर्‍याउँछ। पछिल्ला दिनहरूमा, अनुसन्धानकर्ताहरूले कोविड र पोस्ट-कोविडका लक्षणहरूको बारेमा धेरै कुरा बताए।
नाक बग्ने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता धेरै लक्षणहरू कोभिडसँग सम्बन्धित छन्। उनका अनुसार संक्रमण पछि पनि मानिसहरु पोस्ट कोभिड स्टेजबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ, जहाँ लक्षण महिनौंसम्म रहन्छ। कोभिड पछि छालामा पनि यस्तै केही लक्षणका ट्रेसहरू देखिन्छन् तर मानिसहरूले त्यसमा ध्यान दिँदैनन्। त्यसोभए छालामा देखिने कोविडका यी महत्त्वपूर्ण ४ लक्षणहरूको बारेमा जानौं।
कोविडको प्रभाव औंलाहरूमा देख्न सकिन्छ। यसमा, औंलाहरू बैजनी वा रातो रंग मात्र होइन, तर तिनीहरूले चिलाउने पनि महसुस गर्न सक्छन्। यी लक्षणहरू सबैले महसुस नगर्ने भएता पनि कसै-कसैलाई खुट्टाको औंलाहरूमा सुन्निने, चिलाउने र दुखाइ पनि हुन सक्छ। अमेरिकन एकेडेमी अफ डर्मेटोलोजी एसोसिएसन भन्छन् कि कसैको छाला नराम्रो हुन्छ, जबकि अरूले छाला मुनि थोरै मात्रामा पिप देख्न सक्छन्।
जब तपाईंको शरीर एलर्जीनसँग सम्पर्कमा आउँछ, पित्ताहरू उठ्छन्। छाला विशेषज्ञहरू भन्छन् कि कोभिड-१९ का बिरामीहरूमा पित्तो जस्तो देखिने दागहरू देखा पर्छन्। यदि तपाइँ तपाइँको छालामा कुनै पनि एलर्जी बिना यस्ता दागहरू देख्नुभयो भने, तपाइँ पहिले नै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सुख्खा छालाको लागि धेरै स्वास्थ्य अवस्थाहरू जिम्मेवार छन्, तर धेरै बिरामीहरूमा छालाको सुख्खापन कोभीड सँग जोडिएको छ। विज्ञहरूको विश्वास छ कि यो संक्रमणको समयमा हुन सक्छ वा यो लक्षण संक्रमण पछि महिनौंसम्म छालामा रहन सक्छ।
जाडोमा ओठ फुट्ने समस्या निकै सामान्य समस्या हो । तर कोभिड संक्रमणका लक्षणहरू चिसोका लक्षणहरूसँग ओभरल्याप हुने भएकाले। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईंको ओठ फुटेको छ वा दुखाइ छ भने, यो भन्न सकिन्छ कि तपाईलाई पहिले कोभिड थियो र तपाई कोभिड पछिको अवस्थाबाट गुज्रिरहनुभएको छ।
छालामा देखिने कोभिडका अन्य लक्षणहरू-
विज्ञहरूका अनुसार कोभिडबाट संक्रमित व्यक्तिमा चिलाउने पिम्पल, पिनपोइन्ट स्पट, चिकेनपक्समा ब्लिस्टर देखिने, फ्ल्याट स्पटहरू पनि देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले कोरोनाबाट निको भएर पनि यी लक्षणहरूमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ।
कोभिड पछिको अवस्थाको कुनै परिभाषा छैन , तर यदि तपाईलाई छालामा यहाँ वर्णन गरिएका लक्षणहरू बाहेक अन्य लक्षणहरू छन्, जस्तै थकान, टाउको दुख्ने, नाक बग्ने, घाँटी दुख्ने, स्वाद र गन्ध गुम्ने, लामो समयसम्म वा संक्रमण पछि। यदि तिनीहरू पुन: देखा पर्छन् भने, यसलाई लामो कोभिड भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा, कोविडबाट निको भइसकेपछि पनि यी लक्षणहरूमा निरन्तर नजर राख्नुपर्छ।
Next भ्यालेन्टाइन डेको पछाडि लुकेको दुःखद इतिहास, एक पटक अबश्य पढ्नुहोला